Si kale ku darto animation si aad video clips waa ay ku daray saamaynta kala guurka in ay ku jiraan dhaqdhaqaaq.
Guurka waa "sugayo" waqtiga u dhexeeya looxyada clips kala duwan ee goobta. Ama kuwani waa saamaynta in lagu dabaqo si loo ogaado sida clips ka guuraan mid file ku xiga. Guur la gacanta ama si toos ah dari karaa iyadoo la kaashanayo software kala duwan.
Codsiyada intooda badan waxay leeyihiin theme default kala guur ah oo socon kartaa ilaa qeybtii labaad ee ciyaarta.
Noocyada kala duwan ee kala guurka jiro: baxeysa ama ka, milmi, zoom iwm
Qaybaha soo socda lagu muujiyo tallaabo hab tallaabo hanato kala guurka ku dhufto ee kala duwan.
Qaybta 1aad: Sida loo dar kala guurka ee iMovie on Mac
Qeybta 2: Sidee ku darto kala guurka ee iMovie on iPhone / iPad
Qeybta 3: Sida loo dar kala guurka on Windows
Fur movie ee iMovie.
Dejinta filimada iyo jiidi files si ay u browser warbaahinta.
Riix badhanka menu kala guurka ee dhinaca kore ee midig ee suuqa.
Dooro kala guurka la doonayo ay ka dul mouse ka badan si loo arko saameynta ay suurtagal tahay.
Jiid kala guurka ah ee doorashada iyo meel u dhaxaysa clips aad rabto.
Riix badhanka marsho ku dooro hagaajin kala guurka.
Ilaa pop A ilaa tusi doonaa meel aad si aad saamayn kala guurka ah si kaamil ka dhigi kartaa hagaajin.
Save aad file.
Dooro slide ah.
On Navigator slide ka jaftaa on thumbnail ah clips.
Tubada on guurka.
Markaas ka jaftaa on inay qalab baanadda ah.
Markaas ka jaftaa on inay kala guurka iyo ku dhisan.
Arrow An muuqan doonaa magaca guurka ah.
Dooro saamayn guurka aad rabto iyo waxa ay u astaysto.
Go'aanso dhererka kala guurka ah oo ay soo jiiday slider waafaqsan.
Jiid fallaadhiina waxay ka jihada aad rabto in aad kala guurka ah in la qaato meel (in ay dhacdo kala-guurka ah jiho).
Ka dib kala guurka ayaa la filayaa, garaac slide kale si aad u dalbato kala guurka.
Xagalka A midab muuqan doono labada geesood oo raaceyso si ay u muujiyaan guurka lagu dabaqay si guul leh.
Riix 'qabtay' ee dhinaca kore ee midig ee shaashada dhammayn.
Windows movie sameeyey uu software tafatirka wejiyo iyo fududahay in la isticmaalo video in la heli karo loogu rakibo wax Windows. Version ugu dambeeyay waxaa laga heli karaa bogga internetka ee Microsoft ee functionalities dheeraad ah.
Waxaad u xoojin karto muuqaalka kore ee clips adiga oo isticmaalaya daaqadaha gaare filim ka gudbid daro in si hubban oo siman ka mid goobta ku xiga. Waxaa jira in ka badan 60 hababka kala guurka la heli karaa marka aad isticmaasho gaare movie.
Kuwa soo socda ay fududahay in la raaco tallaabooyinka ay tahay inuu kuugu toosin lahayd nidaamka oo dhan.
Burcad filimka gaare Windows ka menu barnaamijyada.
On menu ugu weyn riix Tools menu.
Dooro menu Video-guur ka hoos hoos menu.
Jiid kala guurka ee la doortay iyo hoos u dhexeeya labada clips in aad rabto in aad si ay u abuuraan kala guurka ah ka.
Waxaad ku eegaan karo kala-guurka ah ee ay ka dul aad mouse ka badan kala guurka icon ah.
Dooro habka ama dariiqada kala guur ah.
Dooro dhererka kala guurka ah oo ay soo jiiday slider bidixda in daboolaa clip ugu horeysay.
Waxaad dooran kartaa in magac daro in kala guurka ama aad daysaan iyadoo magaca caadiga ah.
Keydso mashruuca iyo hadda waa in aad awood u furo ka dib noqon oo soo arag kala guurka aad hadalkiisa raaciyay.
Sidee ku darto music / heesahaaga iMovie on Mac / iPhone / iPad
> Resource > iMovie > Sida loo dar-guurka ee iMovie on Mac / iPhone / iPad